နှင်းတောထဲက Spy ပုံရိပ် တွေထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ VW T7 Multivan ! – MyMedia Myanmar
နှင်းတောထဲက Spy ပုံရိပ် တွေထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ VW T7 Multivan !
အရိုးသားဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင် ကားအမျိုးအစားတွေ အများကြီးထဲမှာမှ Van အမျိုးအစား နာမည်ကြီးလာတဲ့ ခေတ်က ရောက်လာခဲ့ပြီး ကုန်တောင်ကုန်သွားပြီလို့ အချို့က ဆိုကောင်း ဆိုနေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကနေ ပြန်ပြောင်းစဉ်းစား ကြည့်ရအောင်ပါ။ တစ်စုံ တစ်ယောက်ကိုသာ Van ကားဆိုတာ ဘာလဲလို့ မေးလိုက်မိရင် Ford Transit လိုကားတစ်စီး ကိုတည်ဆောက်ထားမယ့် ပုံရိပ်တွေကို ပုံဖော်ပြပြီး နိုင်ငံတစ်ဝန်း ခရီးတွေသွားနိုင်မယ့် အကြောင်းကို ပြောပြ ကောင်း ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ဆွီဒင် နိုင်ငံရဲ့ နှင်းတောတွေထဲက Spy ပုံရိပ် တွေ အနေနဲ့ မြင်တွေ့ရမယ့် Volkswagen ရဲ့ T7Multivan အမျိုးအစား ကတော့ အရွယ်အစား အရရော တည်ဆောက်ပုံအရပါ အလုပ်အကိုင် တစ်ခုခုအတွက် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ တည်ဆောက်ထားပုံ ရပါတယ်။ ယခင်တုန်းက တော့ VW Multivan အမျိုးအစားကို Adventure ယာဉ် တစ်စီးနေနဲ့ ဖန်တီးကာ Springboard ဆန်ဆန် တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ခရီးအကွာ အဝေး အကြာကြီးကို လူအရေ အတွက်များများ တင်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ အခြားသော ပစ္စည်း သယ်ယူ ပို့ ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ ၊ Campervan အဖြစ်‌နဲ့အပြင် တစ်ခါတစ်လေ လမ်းကြမ်းမောင်း အဖြစ်တောင် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့်သဘော ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာ ကတော့ အဆိုပါ ကားအတွင်းက သက်တောင့်သက်သာ ရှိမှုဟာ အခြား သော VW ကားတွေဆီက မျှော်လင့်လို့ ရတဲ့ အရည်အသွေးနဲ့ လုံးဝမတူပဲ တစ်မူ ထူးခြားနေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော အခုမြင်တွေ့ လိုက်ရတဲ့ Spy Shots တွေ ကြောင့်ပဲ အဆိုပါ ကား အမျိုးအစား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အဆင်ပြေပြေနဲ့ ဆက်သွားနေတယ်လို့ပဲယူဆလို့ရပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ပုံတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ T7အသစ်ဟာ ယခင် မျိုးဆက်အဟောင်းထက် ပိုပြီးလည်း ရှည်လာသလို ပိုပြီးလည်း နိမ့်တဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန်ကို မြင်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပုံမှန် အသွင် အပြင်ကတော့ Chunky ဖြစ်တဲ့ ပုံကိုပဲတွေ့ရဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာမပြောနိုင်သေးတဲ့ အချက်အလက် တွေအပြင် ကားကလည်း လက်ရှိ အချိန်ထိ Showroom ပေါ်ရောက်ရလောက်အောင် တောင်မှ ပြီးစီးခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် အကဲဖြတ် မစောဖို့လိုအပ်မှာပါ။ အဆိုပါ ဂျာမနီ ကား ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့ ကားရဲ့ အပြင်ပိုင်းပုံစံကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ သေချာအားထုတ် ထားခဲ့ဟန် တူပြီး ကားရဲ့ ပုံစံကို အခြား အမျိုးအစား တစ်ခုလို့ ထင်ရအောင် ဖုံးကွယ်ထားပေမယ့်လည်း အတွင်းခန်း ကတော့ ငြင်းမရ‌တဲ့ ကွာခြားမှုတစ်ချို့ကို ပေးစွမ်းထားနိုင် တာ တွေ့ရပါတယ်။
ယခင်တုန်းက မြင်ခဲ့ရတဲ့ ပုံရိပ်တစ်ချို့ ကတော့ Cockpit အပိုင်းဟာ Golf အမျိုးအစား နဲ့ ခပ်ဆင် ဆင်ပုံစံ ဖြစ်လို့ နေပါတယ်။ အဆိုပါ Hatchback အမျိုးအစား ကတော့ Software ပြဿနာအချို့နဲ့ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရပေမယ့်လည်း အခု လို T7Multivan အနေနဲ့ Show-room တွေဆီ ရောက်ရှိ လာမယ့် အချိန်မှာတော့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာလောက်ပြီလို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းတစ်ချို့ အရတော့ အခု T7ကားအသစ် ဟာ Petrol အနေနဲ့ရော ဒီဇယ် အနေနဲ့ပါမကပဲ Hybrid Version အနေနဲ့လည်း စတင်မိတ်ဆက် လာနိုင်တယ်လို့ သိထားရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်း အချက်အလက်တွေ မထွက် ပေါ်လာခင်အထိမှာတော့ ကားနဲ့ ပတ်သက် ဆက်စပ် မယ့် Spy Shots တွေကနေ တစ်ဆင့် ရင်ခုန်စွာ ခန့်မှန်း ကြည့်ရဦးမှာပါပဲ။
The post နှင်းတောထဲက Spy ပုံရိပ် တွေထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ VW T7 Multivan ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-19T21:00:34+06:30January 19th, 2021|MYCARS MYANMAR|